Kazakhstan: Adihevitra mikasika ny vokatry ny lalao olaimpika · Global Voices teny Malagasy
Kazakhstan: Adihevitra mikasika ny vokatry ny lalao olaimpika
Voadika ny 06 Avrily 2010 0:08 GMT
Somary tsotsotra ihany ny fahaiza-manaon'i Kazakhstan tamin'ny lalaon'ny ririnina Vancouver noho ny medaly vola fotsy iray mba azon'i Elena Krustaleva tamin'ny biathlon 15km-n'ny vehivavy. Avy any Rosia i Elena ary nihazakazaka ho an'i Rosia foana nefa dia araka ny miseho dia novidian'i Kazakhstan izy ary dia nisy vokany izany, hoy ny KZBlog.
Ny fanoheran'i Pacifistt [ru]:
Nihazakazaka hoa ana firenena maro i Krustaleva. Tsy noraisin'ny tany Belarosia izy – izany no nahatonga azy nankany Kazakhstan. Tsy tena avy any izy. Faly aho, tamin'ny nahazoany ny laharana faharoa, saingy tsy dia misy ifandraisany loatra amin'i Kazakhstan izany, ary Kazakhstan koa tsy dia midika inona aminy loatra.
Misy mpifaninana hafa maneho fahombiazana tsy ho ela. Denis Ten, tanora vao misondrotra eo amin'ny sehatra manerantany amin'ny taranja skate fa mety ho tompondaka taorian'ny “firindra malalaka saiky tonga lafatra na teo amin'ny teknika na teo amin'ny fihetsika”, manohy ny sorany ilay mpitoraka blaogy ary manampy fa tsara ihany izany “ho ana tanora 16 taona nifanandrina tamin'i Pluschenko”.
Mitsikera i Rosvet [ru]:
Mihevitra aho fa tsara ny asa vitany. Fahombiazana izany Laharana faha 11 amin'ny fampisehoana skate amin'ny lalao Olaimpika izany. Efa nahita Kazakh nanao izany tamin'ity taranjam-panatanjahan-tena ity ve ianao? Vao 16 taona fotsiny izy… ary mety hahazo medaily tsara any Sochi … Etsy ankilany, tsy misy federasiona nasionaly momba ny fampisehoana skate matanjaka miaraka aminy – ary manandanja lehibe eo amin'ny fanatanjahantena ny fahefan'ny mpitondra.
Tokony holazaina fa misy ireo olana ary tsy amin'ireo federasionan'ny fanatanjahan-tena samy hafa ihany. Mitaraina eo amin'ny vohin-kalan'ny Komity olaimpikan'i Kazakhstan i KZBlog:
Nandeha tany mba hahafantatra bebe kokoa mikasika ireo atleta Kazakh aho. Nihevitra ny hahalala zavatra mahaliana mikasika azy ireo aho mba hahafahako mitoraka blaogy mikasika azy ireo… ary mba hahaliana an'izao tontolo izao ny momba ireo mpilalao olampikan'ny ririnina any Kazakhstan… Ary inona no hitako? Ny mombamomba ireo mpilalao nangalarina tao amin'ny vohikala ofisialin'i Vancouver – ary ny mahakamo amin'ny ankabeazan'ireo mombamomba ny mpilalao ireo dia tsy ahitana afa-tsy ny anarana, halavàna, lanja ary daty nahaterahana ihany!